झापामा कोरोना संक्रमित ३६, कहाँ के भइरहेछ? – Health Post Nepal
झापामा कोरोना संक्रमित ३६, कहाँ के भइरहेछ?
२०७७ जेठ ११ गते १४:१७
झापामा कोरोना संक्रमितको संख्या ३६ पुगेको छ। शनिबार झापा गाउँपालिका ४ का ३३ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै झापामा संक्रमितको संख्या ३६ पुगेको हो।
झापा गाउँपालिकास्थित डिल्लीराज माविको क्वारेन्टाइनमा रहेका ती व्यक्ति ५ दिनअघि मुम्बईबाट झापा आएका थिए। उनीसँगै स्वाब संकलन गरी धरान पठाइएका ४६ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। झापामा सबैभन्दा पहिला दमक ३ का ६२ वर्षीय पुरुष र त्यसपछि बाह्रदशीका अर्का पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनीहरु दुवै निको भएर घर फर्किसकेका छन्।
गत सोमबार पथरिया मावि कचनकवलको क्वारेन्टाइनमा रहेका एक पुरुषमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो। उनी झापामा कोरोना पुष्टि हुने तेस्रो व्यक्ति हुन्।
लगत्तै मंगलबार त्यहींका ९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट दिउँसो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा माविको क्वारेन्टाइनका पाँचजनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। सोही दिन राति ११ बजे १० जना र बिहीबार दिउँसो ८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। शुक्रबार झापामा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएन। शनिबार एक जनामा कोरोना देखिएपछि झापा गाउँपालिका सिल गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
१२ वर्षीयाको रिपोर्ट नेगेटिभ
गौरीगन्ज २ तुलाचौनकी १२ वर्षिया बालिकाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। शंकास्पद लक्षण देखिएपछि उनलाई जेठ ८ गते मेची अञ्चल अस्पताल लगिएको थियो। त्यहीँबाट उनको स्वाब संकलन गरी पिसिआर परीक्षणका लागि विराटनगर पठाइएको थियो। कोसी अस्पतालको प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गर्दा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य शाखा गौरीगन्जका प्रमुख रामचन्द्र मिश्रले जानकारी दिए। बालिका घर फर्किएकी छन्।
गौरीगन्ज ३ बाट ८८ को स्वाब पठाइयो
क्वारेन्टाइनमा राखिएकाको कोरोनाको परीक्षण थालिएको छ। गौरीगन्ज क्याम्पसको क्वारेन्टाइन र नवनिर्मित अस्पताल भवनको क्वारेन्टाइनमा रहेकामध्ये ८८ जनाको स्वाब संकलन गरी विराटनगर पठाइएको हो। नवनिर्मित अस्पताल भवनको क्वारेन्टाइनबाट ३५ र गौरीगन्ज बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनबाट ५३ जनाको स्वाब संकलन गरी पिसिआर परीक्षणका लागि विराटनगर पठाइएको स्वास्थ्य शाखा गौरीगन्जले जनाएको छ।
भारतमा अलपत्र परेकामध्ये बैरिया र फतेहपुर नाकाबाट थप ३० जनालाई उद्दार गरी गौरीगन्ज क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ।
१५ जनामा आरडिटी पोजेटिभ
मेचीनगरको विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिमा गरिएको र्यापिड डाइनोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) परीक्षणमा १५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका अनुसार ३ सय १५ जनामा गरिएको परीक्षणमा १५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो।
आरडिटी पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिको भिटिएममार्फत स्वाब संकलन गरी पिसिआर परीक्षणपछि संक्रमण भए नभएको यकिन भइरहेको जनाइएको छ।
काँकरभिट्टा मावि, आदर्श मावि र मेचीनगर ११ का स्वास्थ्य चौकी भवनमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण गरिएको हो।